သစ္စာအလင်း: ရဇ္ဇုမာလာ (သို့ ) ဘဝ နွံ မှ ရုန်းထခြင်း
ရဇ္ဇုမာလာ (သို့ ) ဘဝ နွံ မှ ရုန်းထခြင်း
**ဤ လောက ကြီး ၌
မတရားတာမရှိ ၊ မဖြစ်သင့်တာ မရှိ ၊
ပြု သူအသစ် ၊ ဖြစ်သူအဟောင်း**
ဆို တဲ့ လင်္ကာ လေး ကို နှလုံး သွင်းဆင်ခြင် ရင်း ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရား ဟော ကြား တော်မူ တဲ့ တရားတော် ထဲက ကြိုးပန်းကုံး ( ပါဠိလို- ရဇ္ဇု မာလာ ) လို့ ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ကို ကျွန်မ သတိရမိပါတယ်..။ သူမ ဟာ ဒီလို ပဲ လောကအမြင် စင်ကြယ် သွားတဲ့ အခါ ဘဝ ဟာ တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပါတယ်..။
ဘုရားရှင် လက်ထက် တော် အခါ မှာ လူလာ ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ သူက အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်ထား ရတဲ့ ငွေဝယ် ကျွန် ဘဝ ကို ရောက်နေခဲ့ရရှာပါတယ်..။ ကျွန်မချင်းတူတူ သူများနဲ့ မတူ …သူ့ဘဝ က ဆိုးလှတာပေါ့လေ..။
သခင်မ က သူ့မြင်ရင် မုန်းတာ…. တူးတူးခါးခါး မုန်း တော့လည်း ဆံပင်ကို ဆွဲ ပါးရိုက် လုပ်ပါတယ်..။ တစ်ရက်လည်းမဟုတ်..နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်.. ဆိုတော့ကာ ….. စိတ်ညစ်ရလွန်းလို့ သခင်မ ဆံပင် ဆွဲ လို့ မရ နိုင်အောင် ဆံပင်အားလုံး ကို ရိတ် ပြီး ကတုံးတုံး ထားတော့ တာ..။
ကတုံး ကို တွေ့ ပြန်တော့ သခင်မ က ဒေါသ ပိုထွက်…. ပြီး ခေါင်း မှာ ကြိုး ထုံးတွေ ကို ပန်းကုံး သဖွယ် ချည်နှောင်ထားပြီး ရိုက်မြဲ ရိုက် ဆဲ …။ ဒါကြောင့် သူမ ရဲ့ နာမည် ဟာ ကြိုးပန်းကုံး ( ပါဠိလို- ရဇ္ဇု မာလာ ) လို့ အမည် တွင်ရရှာ ပါတယ်..။
တနေ့ နဲ့ တနေ့ အညှင်းဆဲ ခံရတာ များလာတဲ့ အခါ မှာ သူမ ဟာ သေချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်..။ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ ရ..သိမ်ငယ် ညှိုးချုံးမှုတွေ နဲ့ အတူ တစ်နေ့ မှာ သေဘို့ ဆုံးဖြတ် လိုက် ပါတယ်..။ ရေခပ်ချင်ယောင်ဆောင်… ရေအိုးထဲ မှာ ကြိုးခွေကို ထည့်…ပြီးတော့ထဲကို တစ်ယောက်ထဲ ထွက်ခဲ့တယ်..။
တောထဲရောက်လို့ ဆွဲကြိုးချသေ ဘို့ သစ် ပင် မှာ ကြိုးနဲ့ ချည် တဲ့အခါ သစ်ပင် အောက်မှာ ဘုရားရှင် ထိုင်တော်မူနေတာ ဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်..။ ကြည်လင်သော အသရေတော် နဲ့ ကြည်ညို ဖွယ် အတိပြီး တဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ရဲ့ ခြေ အစုံကို ဦးတိုက် တဲ့အခါ..။ သူ့အကြောင်း ကို မေး ပါတယ်..။
အကြောင်းစုံ လျှောက်ထားပြီး တဲ့အခါ ဘုရားရှင်က အတိတ် ဘဝ ကို မြင်အောင် ဆောင်ပြကာ တရား ဟောတော်မူပါတယ်..။ အတိတ်မှာ သူက သခင်မ…. သခင်မ က သူမရဲ့ ကျွန် ဖြစ်ခဲ့တာ .. သခင်မ ဘဝ က ဆံပင်ဆွဲ ပါးရိုက် နှိပ်စက်ခဲ့တာ တွေ သိလာရပါတယ်..။ ကံ ကံ၏ အကျိုး ကို သိလိုက်ရတော့ သူဒီ ဘဝ မှာ ပြန်လည် အကြွေးဆပ်ရတာ ဥာဏ် အမြင် ရှင်းလင်းသွားခဲ့ပါတယ်..။
အကြွေးဆပ်ရတာ နားလည် သွားသလို ခွင့်လွှတ်စိတ် လည်းထား လာနိုင်တော့တာ..။ ရဇ္ဇု မာလာ လေးက ဒီလို တွေး ပါသတဲ့..။ သခင်မ ခမျာ..ငါ့ကိုမြင်ရင် င့ါရဲ့ ကံ ကဓာတ်ပြုလို့ သူ့ခမျာ လုပ်ရရှာတာ..။ ပြုသူ ရဲ့ ကံအသစ်ကို ယူ…။ ဝဋ် တစ်ဖန်လည် တာ ပြန်ခံ ရတော့ မှာ…။ တဖန် ပြန်လည် ခံစားရမှာ ကို တွေး ပြီးတော့ သနားစိတ်တောင်ဝင်လာ တော့တာ တဲ့..။
ကံအကျိုးပေး ကို နားလည် သွားတဲ့ အပြင်……ဥာဏ်အားဖြင့်လည်း အတိတ်ဆိုတာ ပြန်ရှာလို့ တကယ် မရှိ တာ သိလာရပြန်ပါတယ်..။ ခန္ဓာ ငါးပါး ၊ ရုပ်နာမ် နှစ်ပါး တို့ကို ပါ ရှင်းရှင်း သိမြင် ခဲ့တပါတယ်..။
ပဋိသန္ဓေ ၊အိုနာသေ ဟု
လေးထွေ ရင်းမြစ် ၊ ဒုက္ခဖြစ်သည်
မချစ်ယှဉ်တွဲ ၊ ချစ်သူကွဲ နှင့်
လို လည်းမရ ၊ အကျဉ်းပြသော်
ပဉ္စဥပါဒါ ၊ ငါးခန္ဓာ
သစ္စာ ဒုက္ခ ၊ မက်မော လှ၏ ။
ပဋိသန္ဓေ နေရတယ် ဆိုတာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ တယ်...။ လူဖြစ်လာတော့ အို ရတာ..နာရတာ..သေ ရတာ ဆင်းရဲ့ ဒုက္ခ တွေပါ..။ ရှင်သန်နေစဉ် မှာ လည်း မချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူနေရတာ..။ ချစ်တဲ့သူ နဲ့ ကွေကွင်း ရတာ လည်း ဒုက္ခ... နောက်ဆုံး ပဉ္စဥပါဒါ ငါးခန္ဓာ သည် ဒုက္ခ သစ္စာ ဆိုတာ သဘော ပေါက်သွားတော့ တာဖြစ်ပါတယ်..။
သခင် မ ပါးရိုက် တဲ့ ပုံ ကို ဖေါ် တွေး တဲ့အခါ အရင်ကလို ဒေါသ မာန နဲ့ ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ချင်တာ..။ မ ပေါ်လာတော့ပဲ စိတ်အမြင် ရှင်းသွားခဲ့တယ်..။ ဘုရားရှင် ရဲ့ တရားနာယူ ရရင်း သောတာပန် ဥာဏ်အမြင် ရသွား တဲ့ *ရဇ္ဇု မာလာ * ဟာ ပဉ္စဥပါဒါ ငါးခန္ဓာ အပေါ် မှာ ထဲထဲဝင်းဝင် ဆုပ်ကိုင်မထားတော့ဘူး..။ မရှိတာကို အရှိ မလုပ်တော့ ပါဘူး ။
ပုထု ဇဉ် နဲ့ ဘုရားသားသမီး ကွာ ခြားသွားတဲ့အချက် ဖြစ်လို့ *ရဇ္ဇု မာလာ * ဟာ ခွင့်လွှတ် နိုင်သွားပါတယ်..။ သခင်မ ပြန်ခံရမှာ ကို တောင် ပြန်သနားနေတာ မို့ မျက်နှာလေးက လည်းကြည်လင် နေပါတော့တယ်..။
သူ့ဘဝ ကံကြွေးချ တဲ့နေရာ က သခင်မ ရဲ့ အိမ် ပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ နားလည် တော့ သခင်မအိမ်ကိုပြန်ပါတယ်..။ ပေါ့ပါးသွားတဲ့ စိတ်ကြောင့် ပြုံးယောင်ယောင်သန်းနေတဲ့ *ရဇ္ဇု မာလာ * ဟာ ထူးခြား နေ သလို မမြင်ရတဲ့ အရှိန် အဝါတွေလည်း ထွက်ပေါ် နေပါတော့တယ်..။
ထူးခြားတဲ့ သူ့ကို သခင်မရဲ့ ဖခင်ကြီး က အိမ်ပေါ်ကနေ အကဲခတ် ရင်း သမီးအရင်းလို ချစ်တဲ့ စိတ်ပေါ် လာတော့တာ..။ ရိုက်နေကျ သခင်မက ရိုက်မယ်လုပ်တော့ အဖေကြီး ကဝင်တား ပါတယ်..။ ငါသူ့ကို သမီးအဖြစ် မွေးစားမယ်..။ နင် လက်ဖျား နဲ့ တောင် မတို့ ပါ နဲ့ လို အမိန့်ထုတ်ပြန် ပါတယ်..။
သမီးအမူအယာထူးခြားတယ် အရင်နေ့တွေ လို မှုံမှိုင်း မနေပါ့လား ။
ထူးခြား လာရတဲ့ အကြောင်းပြေပြပါအုံးသမီးရယ် ဆိုတော့ ဘုရားရှင် နဲ့ တွေ့ ခဲ့ ပုံ အစအဆုံး ပြောပြတဲ့ အခါ*ရဇ္ဇု မာလာ * တို့ တစ်အိမ်လုံးဘုရားရှင်ထံ အပြေးအလွှားဖူးမျှော် ကြပါတယ်..။
တရားဓမ္မအဆုံးအမ တွေ ကိုယ် စီ ကိုယ် ငှ ရသွားကြပြီး သောတာပန် တည် သွား ကြပါတယ် တဲ့..။
သောတာပန် ဖြစ်တဲ့အခါ...ပြီးပြီးသားပြီးနိုင်သွားတယ်..။ အရိပ် ဟာ အရိပ် အာရုံဒွါရ တိုက်လို့ ပေါ်တာ အကောင် မဟုတ်..အသစ်အသစ် သာဖြစ်တယ် ရယ် လို့ သိသွားကြတယ်..။
အရာရာခွင့်လွှတ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွား ခဲ့တာ မို့....မို့ ကြည်လင် ရှင်းသန့် တဲ့ စိတ်အစဉ် ..... နဲ့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်း ရတာအမှန်ပါ..ပဲ ။
ဒါကြောင့်လည်း သောတာပန် ဆိုတာ အပါယ် လေးပါး မကျ တာ လို့ ယုံကြည်ရင်း *ရဇ္ဇု မာလာ * လောက်မျှပင် မဆိုး လှ တဲ့ဘဝ ကို ဆင်ခြင် လိုက်ရပါတော့တယ်..။
(ဝါခေါင် လပြည့် -နေ့ အမှတ်တရ )
သြဂုတ်လ တရားစခန်းစတုတ္ထ နေ့ ၁၃.၈.၂၀၁၆ နေ့ တွင် ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဟောကြား တော်မူသော တရားတော်ကို ကိုးကားရေးသားပါသည်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:45 PM
ဦနော လောကော အတိတ္တော တဏှာဒါသော
သူမ ချစ်တဲ့ ဒါးကမြစ်